'कान्स'मा देखियो दिपिकाको क्रेजी लुक, फ्यानले भने 'पर्फेक्ट मिसेज रणवीर सिंह' ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywood‘कान्स’मा देखियो दिपिकाको क्रेजी लुक, फ्यानले भने ‘पर्फेक्ट मिसेज रणवीर सिंह’ !
May 18, 2019 Tulasa Karki Bollywood, Celebrity, Gallery, News 0
शुक्रबार दिनभर सामाजिक संजालमा दिपिका पादुकोणको ‘कान्स फिल्म फेस्टिबल’बाट अलग-अलग लूकहरु बाहिरि रहे । दिपिका पहिला क्रिम र ब्राउन कलरको गाउन लगाएर रेड कार्पेटमा आएकी थिन । त्यसपछि उनको फरक-फरक लुकहरु सामाजिक संजालमा आइरहेका थिए ।
त्यो सबैमा उनको क्रेजी लुक देखिएको छ । जसलाई देखेर दिपिका र रणवीरका फ्यानहरुले उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा पनि बताएका छन् । एउटा लुकमा भने दिपिका लाइट ग्रीन कलरको गाउनमा देखिएकी छिन् । जसमा उनलाई निकै चन्चले देखिएको छ । उनले आफ्नो अलग-अलग तस्विरलाई सामाजिक संजालमा शेयर गरिरहेकी थिन । जसको कमेन्टमा उनका फ्यानहरुले ‘पर्फेक्ट मिसेज रणवीर सिंह’ भनेर लेखेका छन् ।